You are here: Home / Hawlgalka
Qaar baa ururiya stamps, waxaan soo ururiyaa xalal dhab ah "hadda" oo ka socda adduunka.
Wax kastoo ay yihiin xalal waayeel ah, xalka ugu dambeeyay ama xal cusub oo cusub, waa la soo ururin doonaa loona kala qeybin doonaa! Wax kastoo ay yihiin badeecooyin, nidaamyo, fikrado, mishiino, waa la ururin doonaa loona kala saari doonaa!
Hal xaalad oo keliya: waa inay ahaadaan kuwo la heli karo maanta waxaana loo isticmaali karaa hadda si loo hagaajiyo, dayactiro, loo bogsado, loona horumariyo dhulkeena Earth. Bartilmaameed: midda xiriiro badan! Mashiinka dharka cusub ee isticmaala 50% koronto yar ayaa saameyn ku leh adiga iyo dhulka meeraha. Cabbir-warshad alwaax leh 70% waxtarka gubashada ayaa saameyn ku leh qoyska oo idil. Mashiinka ka dhiga biyaha hawada khafiif ah saameyn ku leh bulshada oo dhan!